ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ယင်း၏ ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းနှင့် မူဝါဒများ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေ နှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အတိုင်း ပြုကျင့် လိုက်နာခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်မှု တိုင်းတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင် နှင့် ရှယ်ယာရှင်များ အပေါ် အဓိက ထားပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များ နှင့် အတူ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ပြီး စေတနာ ထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အချက် များကြောင့် လုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်မှု တိုင်းတွင် ပြဿနာ အကြီးအကျယ် မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ငါးနှစ်ကျော် အချိန်ကာလ အတွင်းတွင် အောက်ပါ စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် အခြေခံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊
မူဆယ် နန်းတော်ဂိတ် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး စခန်း
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်၊ သစ်သီးရောင်းကွင်း စီမံကိန်း အခြေခံ အဆောက်အအုံ (ပထမအကြိမ်)
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်၊ သစ်သီးရောင်းကွင်း စီမံကိန်း တိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်း၏ အခြေခံမြေသားလုပ်ငန်း (ဒုတိယအကြိမ်)
၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ရွှေလီ-၃ ရေအားလျှပ်စစ် ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန် သံကူကွန်ကရစ် သွန်းလောင်းခြင်း (ပထမအကြိမ်)
၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ရွှေလီ-၃ ရေအားလျှပ်စစ် ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန် သံကူကွန်ကရစ် သွန်းလောင်းခြင်း (ဒုတိယအကြိမ်)
Company Name : GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office : KL-15, Union Main Road, Kaung Mu Loi Quarter, Muse, Shan State, Myanmar.
Business Category : Operate the business of general contract construction for government agencies, state enterprises and private entities, in the form of main contractor, subcontractor or joint venture or consortium.
Company Registration No. : 3010/2012-2013 (Date: 22 Oct. 2012)
Business Commencement No. : 13/2012-2013 (Date: 18 Dec. 2012)
Authorized Capital : 30,000,000,000 MMK (30 Billion)
Per Share Value : 1,000 MMK
Issued Shares : 7,143,800 shares
Paid-up Capital : 7,143,800,000 (7.14 Billion MMK)
Underwriter : KBZ Stirling Coleman Securities Co., LTD, Strand Square, 2nd Floor, Room 2-15, No. 53, Strand Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar. www.kbzsc.com
Legal Advisor : U Thein Shwe (B.A., H.G.P., R.L.) Advocate
TOP Sein Win & Associate Consulting Ltd.
Building 6, Room 323, Kyaikasan Housing, Tamwe Tsp., Yangon